Budata PowerISO maka Windows
PowerISO so na ngwa ọrụ ihe eji eme diski nke ọma ị nwere ike izo aka na CD, DVD ma ọ bụ Blu-Ray foto faịlụ.
PowerISO bụ sọftụwia emere iji gboo mkpa gị niile gbasara faịlụ dị ka ISO, BIN, NRG, CDI, DAA na ihe ndị ọzọ. Site na iji PowerISO, ị nwere ike ịhụ ọdịnaya nke faịlụ iSO oyiyi na-enweghị ike ịmepụta diski mebere ma wepụ ọdịnaya ndị a na folda ị kwupụtara. Usoro ihe omume ahụ na-enyekwa ndị dị mma ọrụ maka ọrụ a. Site na Power ISO, nke na-etinye ụzọ mkpirisi na menu menu Windows meghere site na ịpị aka nri, ị nwere ike ibupụ ọdịnaya ha site na ịpị faịlụ faịlụ oyiyi.
Ọ na - enye gị ohere ịgba CD, gbaa DVD, gbaa Blu-Rays, wdg, mepụta diski egwu, diski data na diski vidiyo site na iji faịlụ onyonyo PowerISO gị. Site na PowerISO, ị nwere ike ịmepụta CD sitere na faịlụ ọdịyo echekwara na kọmputa gị, dịka MP3, FLAC, APE, WMA. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchekwaa egwu dị na CD CD na kọmputa gị na usoro akọwapụtara.
Site na PowerISO, ị nwekwara ike ịmepụta faịlụ nke gị nụdị iSO na BIN. Nwere ike iji CD, DVD ma ọ bụ Blu-Ray discs dị ka isi iyi maka ọrụ a, yana faịlụ echekwara na diski ike gị. PowerISO na - enyekwa gị ohere idezi ma mezie ọdịnaya nke onyonyo ISO.
Nwere ike idowe faịlụ onyonyo gị na diski mebere ị ga-eji PowerISO rụọ ọrụ wee jiri faịlụ onyonyo ndị a na kọmpụta gị na-ejighi ọkụ gbaa ha na CD, DVD ma ọ bụ Blu-Ray.
Ọ na - enyere gị aka ịtụgharị faịlụ onyonyo PowerISO na ụdị dị iche iche. Ihe omume a nwere ike igbanwe onyonyo BIN na ISO yana gbanwee faịlụ onyonyo ndị ọzọ na ISO.
I nwekwara ike iji PowerISO mepụta bootable USB draịva. Iji atụmatụ a, ị nwere ike ịmepụta diski USB ị nwere ike iji wụnye Windows site na USB. Notu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta bootable CD na DVD diski.
Rịba ama: Ihe omume a na-abịa na ntinye ntinye ntinye ngwanrọ ọzọ. Kwesighi ịwụnye sọftụwia ndị ọzọ iji gbaa mmemme ahụ.
Mmepụta: PowerISO Computing
Site na Passkey Lite, ị nwere ike wepu nchedo okwuntughe nke diski DVD na Blu-ray gị ngwa ngwa wee...
Ashampoo Burning Studio Free bụ ike CD / DVD ọkụ mmemme na-abịa na enyemaka nke ọrụ ndị ike gwụrụ...
AutoRip-enye gị ohere iji tọghata gị DVD nkiri dị iche iche formats, zọpụta ha na kọmputa gị...
Easy Disc Burner bụ mmemme efu ebe ndị ọrụ nwere ike gbaa faịlụ na nchekwa na kọmpụta ha na CD, DVD...
WinBin2Iso bụ sọftụwia Windows efu na-adị mfe iji megharịa faịlụ BIN gị ka ọ bụrụ faịlụ ISO. Na...
7Ọkụ bụ free CD/DVD-Blu-ray ọkụ mmemme na-enye ohere ọrụ ọkụ foto, videos, music, akwụkwọ na yiri...
Site na Acronis True Image Home 2022, ị nwere ike ịkwado ngwa na mmemme niile, ọkachasị sistemụ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe faịlụ egwu MP3 ma ọ bụ WMA ọkacha mmasị gị na CD ọdịyo wee gee ha ntị nime...
Audio Grabber ọ bụla bụ mmemme efu emepụtara maka ndị ọrụ kọmputa iji chekwaa CD/DVD egwu ha na...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwá ọrụ dị mfe iji mepụta nchekwa nke faịlụ sistemụ gị yana faịlụ onyonyo maka...
Ashampoo emezigharịrị Burning Studio, ngwa CD/DVD/BD ya, na-eburu nuche mkpa nke ụwa ịntanetị...
Ngwa DAEMON USB bụ ngwa enyi na enyi na-enye gị ohere ịkekọrịta ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa gị site...
Ọ ga-ekwe omume ịnweta nsonaazụ ọkachamara na AutoRun Typhoon, nke na-enye gị ohere ịgbakwunye...
Express Rip bụ ngwa nefu na onye ọrụ na-enye gị ohere ịchekwa egwu dị na CD egwu gị na kọmputa gị...
HandBrake bụ mmemme dị mkpa maka ndị ọrụ Windows. Ọ rụrụ DVD na Blu-Ray ntughari na ndekọ usoro na...
Otu nime aha mbụ na-abata nuche ma a bịa nihe gbasara imepụta diski na ngwanrọ njikwa, DAEMON...
StarBurn bụ sọftụwia efu na nke na-aga nke ọma nke ị nwere ike iji maka ọkụ CD, DVD, Blu-ray ma ọ...
Parkdale bụ mmemme na-aga nke ọma, nefu na obere obere nke na-enye gị ohere ịnwale ọgụgụ na ide ọsọ...
Ị nwere ike ịkwado CD ma ọ bụ DVD gị na kọmputa gị site na iji mmemme CD Virtual. Ị nwere ike...
ISO Workshop bụ ngwa bara uru nke na-enye gị ohere ịmepụta faịlụ onyonyo ISO ngwa ngwa wee gbaa ha...
Ime Anwansi DVD Copier bụ kemfe DVD oyiri omume na i nwere ike iji na-idetuo gị DVD nkiri dị iche...